Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Dizziness အမူးရောဂါ
ကျမ တားဆေးကို စနစ်တကျသုံးတယ်။ အခု ခေါင်းမူးနေတယ်။
Lately, I've been getting dizzy all the time. Since we use birth controls inaproper way, I am quite sure I am not with child. I do exercises3or4timesaweek and am pretty healthy apart from the dizziness. My weight is 47 kg and height is 5'2". Last time I checked, I don't have diabetes, hep-b or any heart condition. Sometimes, I feel giddy as if I don't have enough oxygen coming in when I breathe but that's very rare. I used computeralot so do you think it has something to do with my eyes? I just moved to Finland with my hubby three months ago so I've been somewhat stressed out. Do you think the stress is the reason and if so, what should I do about it? I'd really appreciate if you could give me some advice on my constant dizziness and sometimes headache.
အရပ် 5'-2'' နဲ့ 47 Kg (103 Lb) ရှိနေသူတွေက Small Frame အုပ်စုထဲမှာပါတယ်။
Dizziness အမူးရောဂါဆိုတာကို တိတိကျကျ ဖေါ်ပြရရင် Lightheadedness ခေါင်းထဲ ပေါ့နေတာ၊ Vertigo ခေါင်းထဲမှာ ဝိုင်းခြာလည်နေတာ၊ Nystagmus မျက်လုံးက စိတ်ကလုပ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ အချက်ကျကျ မြန်မြန်လှုတ်နေတာ၊ Syncope သတိလက်လွတ် ဖြစ်တာတွေနဲ့ တွဲနေတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေ မပါဘဲ ခေါင်းမူးတာက စိုးရိမ်းစရာမရှိပါ။
Dizziness လဲခေါ် Giddiness လဲခေါ်တဲ့ ခံစားရမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းခံတွေ များတယ်။ ဦးနှောက်ကို အောက်စီဂျင် လုံလောက်အောင် မရလို့ ဖြစ်တာများတယ်။ နှလုံးခုန်မမှန်တာကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုင်ရာကနေ ရုတ်တရက် ထလိုက်ချိန်မျိုးမှာ ဖြစ်တာက သွေးဖိအား ယာယီကျသွားလို့ပါ။ သွေးအားနည်းနေသူ (ဟီမိုဂလိုဘင်) နည်းနေသူ၊ နောက်ပြီး Decongestants အအေးမိပျောက်ဆေး၊ Antidepressants စိတ်မကျဆေး၊ Antihypertensives သွေးဖိအားကျဆေး၊ Antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေး နဲ့ Diuretics ဆီးသွားဆေးတွေ သောက်နေရင်လဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဝမ်းပျက်-ချွေးထွက်များသူတွေလဲ သွေး-အရည်ထုထည်ကျနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
တကယ်လို့ ခေါင်းထဲမှာပေါ့နေပြီး သတိလစ်ချင်တာနဲ့တွဲနေရင် နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေး-ကုသရမယ်။ Diabetes mellitus ဆီးချို၊ Multiple sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လ်ရိုးဆစ်) ရောဂါ နဲ့ Parkinson's disease (ပါကင်ဆိုနဇင်) ရောဂါနဲ့လဲ တွဲနေတတ်တယ်။
နားအတွင်းဆုံးထဲက Balance organs ကိုယ်ခန္ဓာမျှခြေကိ်ုထိန်းပေးနေတဲ့ အင်္ဂါတွေမှာ ရောဂါရရင် ဥပမာ Labyrinthitis ရောဂါ၊ Ménière's disease နားအတွင်းဖုံးလွှာရောင်ရောဂါ၊ Vestibular neuronitis နားအာရုံကြောရောဂါ၊ Tinnitus နားထဲမည်နေတဲ့ရောဂါတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် Perforated eardrum နားစည်ပေါက်ခြင်း၊ Otitis media နားအလည်ခန်း ရောင်ခြင်းဖြစ်ရင်လဲ မူးနိုင်သေးတယ်။
Double vision ရုပ်၂ ခု မြင်နေတာနဲ့တွဲနေရင် Brain stem ဦးနှောက်-ပင်စည်နေရာမှာ ရောဂါရနေသလား စစ်ဆေးရမယ်။ မူးတာက Slurred speech စကားပြောသိပ်နှေးလာတာနဲ့တွဲနေရင် Atroke ဦးနှောက်လေဖြတ်တာနဲ့ Brain tumor ဦးနှောက်-အကျိတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
တခြား အကြောင်းခံတွေကတော့ Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကဲ၊ Stress စိတ်ဖိအားများ၊ Fatigue အားကုန်၊ High fever အပြင်းဖျား၊ Strenuous coughing ချောင်း အတင်းဆိုးတာ၊ Straining with defecation or urination ဆီးသွား-ဝမ်းသွားတာမှာ အားစိုက်ထုတ်ရတာ၊ Stomach flu အစာအိမ်ရောင်၊ Common cold အအေးမိ၊ Pressure on the neck လည်ပင်းမှာ ဖိအားသက်ရောက်ခံနေရတာ၊ Carnival rides ပတ်ခြာလည်ကစားစရာကို စီးတာ၊ Low blood pressure သွေးဖိအားကျတာ၊ Severe pain သိပ်နာကျင်တာ၊ Fright ကြောက်စိတ်ကြီးတာ၊ Standing rigidly at attention သတိဆွဲပြီး အကြာကြီး ရပ်နေရတာ၊ Alcohol intoxication အရက်သောက်များတာ၊ Illicit drugs မူးယစ်ဆေး၊ Hyperventilation အသက်ရှူ အလွန်မြန်တာ၊ Low blood glucose သွေးထဲသကြားဓါတ်နည်းတာ၊ Hysterical seizures (ဟစ်တီးရီးယား) အတက်ရောဂါတမျိုးတွေဖြစ်တယ်။
အသက် ၄ဝ ကျော်သူတွေမှာ ၄ဝ% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် ၂ ဆ နည်းပါး ပိုဖြစ်တယ်။ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါရှိသူထဲက ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်၊ Multiple sclerosis ရောဂါရှိသူတွေထဲက ၃ ယောက် ၁ ယောက်၊ အမူးရောဂါ ခံစားနေရသူတွေထဲမှာ ၂၅-၄ဝ% ဟာ Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီရောဂါအကြောင်း သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 5:07 PM